19 Oct, 2018 - 00:10	 2018-10-18T10:58:51+00:00 2018-10-19T00:02:09+00:00 0 Views
KWAYEDZA makadii? Ndakazomuwana wandaitsvaka. Ndinotenda, vachiri kutsvaga chiregai kufona pa0785 138 204.
Makadini veKwayedza? Ini ndiri mukadzi ane makore 23 ndotsvagawo murume ane makore 30 zvichidzika. Ngaave ari pachokwadi, ari pamushonga uye anoshanda. Ndine mwana 1, munondibata pa0712 168 939.
Ndiri murume ane makore 45. Ndiri kutsvagawo mukadzi wekushamwaridzana naye. Anondibata pa0734 640 090.
Makadii veKwayedza? Ndiri musikana ane makore 21, ndinoda mukomana ane makore 27 zvichidzika anoshanda ane dzidzo iri nani. Ngaave mutsvuku kana mushava anoda muchato uye akanaka pachiso nemwoyo ari muHarare. Ndinoda asina kumboroora nekuti ini ndiri mhandara uye achipinda Pentecostal Church. Nhare yangu Whatsapp nekufona chete pa0718 454 457.
Makadini veTishamwaridzane? Vaifona pa0719 580 093 chiregai kufona ndakawana wandaida. Ndinotenda nechirongwa chino.
Ndiri murume ane makore 38, HIV negative uye ndotsvagawo musikana ane makore 18 – 25. Ngaave asiri pamushonga uye asina mwana. Ndoda ari serious, mutsvuku ari munaku. Akagamuchira Jesu ndibate pa0718 090 912.
Ndakamuwana wandaida saka vaifona kana kutumira mameseji pa0773 859 110 chiregai zvenyu. Ndinotenda veKwayedza.
Makadii veKwayedza? Ndiri murume ane makore 36 nevana vaviri uye ndinotsvagawo mudzimai anoda zvemba. Nhamba dzangu 0778 064 225.
Makadii veKwayedza? Ini ndinotsvagawo musikana wekuroora ari pachokwadi. Ngaave ane makore 18 – 19 akanakawo. Anondibata pa0783 425 759.
Ndiri mukomana ane makore 22, ndinotsvagawo musikana ane makore 18 kusvika 21 anoda zvemba asingamwi mushonga. Anonga ada andibatewo pa0779 485 366.
Makadini? Ndiri kutsvagawo mukadzi ane makore 25 – 34. Ini ndine mwana wangu 1, andifarira anondibata pa0715 814 465.
Makadii veKwayedza? Ndinotsvagawo mukomana ane makore 28 zvichidzika chero ane mwana 1, ini ndinaye. Ndobatika pa0778 247 037.
Makadii? Ndiri murume ane makore 38 nemwana 1. Ndinotsvgawo mukadzi wekuroora ane makore 38 zvichidzika. Ndinoshanda uye handirwari, andida ndibatei pa0777 662 521.
Makadii? Ndiri kutsvagawo mudzimai wekuwadzana naye ane makore 18 – 28, ini ndine makore 30. Vanoda ndibatei pa0713 876 037.
Ndiri mukomana ane makore 28, ndinotsvagawo musikana wekugarisana naye, kubva pamakore 22 kusvika 28. Ari pachokwadi ngaandibate pa0782 129 055.
Ndiri musikana ane makore 24, ndotsvagawo mukomana ari serious nezvemba unogara muHarare. Anoda asiri pamushonga ngaandibate pa0734 611 751.
Makadini veKwayedza? Ndiri mukadzi ane makore 39 nemwana 1, ndinodawo murume wekuvaka naye imba akavimbika ari serious nekuti ndaneta nematsotsi. Varume vane vakadzi ndapota musafona zvenyu, ndinoda anoshanda nekuti ini ndinoshandawo. Ndiri pamushonga asi handiratidzi saka ndodawo wakafanana neniwo ane makore 40 – 45 anotya Mwari. Nhare yangu 0716 446 784.
Ndiri murume ane makore 49 akafirwa, ndine vana vatatu ndichinamata kuS.D.A. Ndinotsvakawo mudzimai ane rudo. Anondida andibate pa0718 421 639.
Ndiri murume ane makore 36 nemwana 1. Handimwi doro nekuputa fodya. Ndinotsvaga mudzimai ane mwana 1 seni. Vanoda mahumbwe musanditsvaga. Ndinoda mudzimai ane makore 18 kusvika 30. Anoda ngaabate baAshley pa0719 796 830 chero nguva.
Makadii veKwayedza? Ini ndiri musikana ane makore 23, ndinotsvagawo mukomana wekushamwaridzana naye ari pachokwadi uye asiri pamushonga. Ndinoda ane makore 28 zvichikwira. Ndinotenda chose nekushambadza tsamba yangu. Nhare yangu 0717 189 187.
Ndiri murume ane makore 34 ekuberekwa, ndotsvagawo mudzimai anoda imba ane mwana wake nekuti ini ndinayewo. Ndinoda ane makore 30 zvichidzika. Andida ndibate pa0778 864 469.
Makadii? Ndiri mukadzi ane makore 29 nevana 3, ndinodawo murume ave kuda zvemba asina chirwere ane makore 36 – 40 asi varume vevanhu bodo. Nhare yangu 0776 302 976.
Ndiri murume ane makore 36, ndotsvagawo mukadzi ane makore 20 kusvika 26 ane mwana 1 kana asina. Andida ngaafone pa0773 918 622.
Ini ndiri murume ane makore 38, ndinodawo mukadzi wekuroora ane makore 23 kusvika 38. Nhamba dzangu 0778 579 211, ndiri muHarare.
Ndiri murume ane makore 29 ekuberekwa, ndotsvagawo mukadzi akavimbika uye ari pachokwadi ane makore 20 kusvika 25. Nhamba dzangu 0716 782 516.
Ndiri murume ane makore 38 nevana 5, ndotsvakawo mukadzi anoda zvemba ane makore 22 kusvika 28. Handisi pamushonga, andida ngaandibate pa0717 109 369.
Ndiri mudzimai ane makore 32, ndinotsvagawo murume mufundisi akafirwa kana asati awana ane makore 38 zvichikwira. Ngaafone pa0777 881 382.
Makadii? Ndiri murume ane makore 25, ndinotsvagawo mukadzi kana musikana ane mwana mumwe, kunyanya anoshanda mumba. Anoda ngaandibate pa0772 208 068.
Makadii zvenyu? Ini ndiri mukadzi ane makore 30 nemwana mumwe chete? Ndiri pamushonga uye ndinotsvagawo murume ari pamushonga seni asi asingaoneke kuti ari pamushonga ave kuda zvemba. Vanoda zvekutamba kana matsotsi kwete. Ngaave anoshanda, nhare yangu 0718 458 109.
Ndiri mukadzi ane makore 19 nemwana 1. Ndinodawo murume ane makore 22 – 26. Andida nhamba dzangu 0771 964 865.
Makadiniko zvenyu veKwayedza? Ini ndinonzi lshmael Chiwaya, ndine makore 36 uye ndinotsvagawo mukadzi ane makore 26 kusvika 32 ari pachokwadi. Anoda ngaandibate pa0777 291 993.
Makadii? Ini ndiri mukomana ane makore 23, ndinoda musikana wekushamwaridzana naye ane makore 18 – 20. Nhare yangu 0713 102 064.
Makadii? Ndiri Murume ane makore 32, ndainge ndakaroora uye ndine mwana 1. Ndodawo musikana ane makore 22 kusvika 28 wekuroora. Ngaandibate pa0773 080 744.
Makadi veKwayedza? Makaita basa ndakazomuwana wandaida saka vachiri kufona pa0774 295 443 chiregedzai.
Ndiri murume ane makore 36, ndinodawo mukadzi wekuroora. Anondida ngaandibate pa0775 182 777.
Ndiri murume ane makore 39, ndinotsvaga mukadzi akavimbika asina chirwere, asina hutsvina, anonamata uyezve ndakasununguka kutorwa ropa. Andifarira ngaandibate pa0782 668 964.
Makadii veKwayedza? Ndiri mukadzi ane makore 29, ndinotsvagawo murume ane vana vake. Ari pachokwadi anoshanda, andida ngaandibate pa0784 516 812.
Makadii? Ndiri murume ane makore 47, ndiri pamushonga uye ndotsvakawo mukadzi ane makore 30 kusvika 35. Anoda imba ngaandibate pa0784 206 853.
Ndiri mukadzi ane makore 38 ari positive uye ndodawo murume anoda wanano ari positive. Ndinobatika pa0771 325 024.
Makadii? Ndotsvaka murume anoshanda ari negative seni. Ndine makore 19 nemwana 1. Nhare yangu 0774 718 223.
Makadii veKwayedza? Ini ndiri murume ane makore 25 nemwana 1. Ndotsvakawo mukadzi ane makore 23 zvichidzika kusvika pa19 kana ane mwana wakewo. Ndinoda anoshanda, ini ndoshandawo muHarare asi kumusha kuMasvingo. Andida ngaandibate pa0775 045 315.
Makadii? Ini ndiri murume ane makore 42, ndinotsvagawo mukadzi anoda kuroorwa. Ngaave anoshanda asiri pachirongwa. Ndine vana vatatu, nhare yangu iyo 0778 331 668.
Makadii? Ndiri mukadzi ane makore 28 nevana 2, ndiri pamushonga uye ndinotsvagawo murume anoda zvemba. Ndinobatika pa0783 848 617.
Makadini veKwayedza? Ndiri mukomana ane makore 21, ndinodawo musikana ari pachokwadi ave kuda zvemba ane makore 18 – 20 ari HIV negative. Andifarira ngaandibate pa0782 261 007.
Makadii? Ndinonzi Misheck, ndiri mukomana ane makore 23 uye ndinotsvagawo musikana ane makore 18 kusvika 20. Asina chirwere seni, akanaka ngaandibate panhare yangu 0774 771 414.
Ndinotsvagawo musikana ane makore 18 – 22. Ini ndine makore 23. Ada nezvangu anondibata pa0778 627 548.
Ndiri murume ane makore 46 okuberekwa, ndinodawo mukadzi ane makore 25 kusvika 30 ari HIV negative. Anoda ngaandibate pa0712 359 692. Ndiri mushandi weHurumende